Sidee badan aad ka ogaato ku saabsan Beta Spotify
1. Waa maxay beta Spotify
2. Spotify beta iyo Spotify premium
3. Spotify beta ee macruufka / daaqadaha / Android / Mac / Linux
1. Waa maxay ee beta Spotify
Spotify Beta waa version hordhac ah oo muusiko ah madal Spotify ah. Spotify waa adeeg si fiican u yaqaan in industry music. Iyadoo adeegyadeeda gaar ah iyo ururinta, Spotify ayaa la dhigay imprints u cabaa. Spotify ma aha oo kaliya ayaa laga qaaday music la dhageysto khibrad heer oo kala duwan, laakiin sidoo kale waxay u taagan tartanka sida adag la mid ah adeegyada sida Pandora, Soundcloud, AppleMusic, iwm .. network Spotify hadda waxay leedahay in ka badan 7 million users firfircoon (xisaab-free), iyo in ka badan 2 milyan oo firfircoon account premium macaamiishu.
Versions Beta ee software waxaa lagu bilaabey suuqa si ay jawaab-celinta ka users ku saabsan hagaajinta codsiyada hesho iyo sidoo kale in la helo fikrado siyaada ah. Dhawaan Spotify ayaa sidoo kale isku dayay habkan si ay u abuuraan ugu fiican in raali galin lahayd dalabka on users ay.
2. Spotify beta iyo premium Spotify
Spotify ayaa lala iman lahaa farsamo ay billaabeen in ay u suuq ay wax soo saarka, iyo in uu yahay iyada oo la samaynaayo qaar ka mid ah muuqaalada aasaasiga ah ee ay heli karaan dadka isticmaala lacag la'aan ah, iyo kuwa gaarka ah qaar ka mid ah dadka isticmaala lacagta. Laakiin haddii aad rabtid in aad isku qori account Premium ka, waxaad u tarayo u yar intii £ 9.99 bishii. Adiga ayaa iska dareemi kartaa faraqa u ah ee aad waayo-aragnimo dhegaysiga muusikada. Spotify mar hore ayaa la siiyaa qaar ka mid ah sifooyinka wanaagsan for 'users Free', laakiin sidoo kale, kuwaas oo isticmaala lacag la'aan ah ku yeelan karto 30 maalin tijaabo ah oo BILAASH ah ee 'adeegyada Premium'. Hadda oo ay wax kala duwan. Waxaad ku wici kartaa 'waxay ISKU DAY aad iibsanayso'.
Kuwa soo socda oo ku saabsan qaababka lagu heli karaa BETA iyo Premium ka wada hadli lahaa.
Helitaanka kuwan raadkaygay
Dhammaan kuwan raadkaygay waxaa laga heli karaa Dhammaan kuwan raadkaygay waxaa laga heli karaa
Play kuu gaar ah oo ku saabsan baahida mp3
Haa, waayo, desktop
shaandheyn kaliya - u mobile Haa
Xadka Track play
xaddidan 5 jeer Ku xaddidan 5 jeer
Samee playlists caadadii
Ma la heli karaa Haa
Qaado music dibadda
14 maalmood xadka Haa
On baahida loo qabo desktop
shaandheyn kaliya ee mobile (6 jeer saacaddiiba kuwan raadkaygay) On baahida
Spotify dhex hardware dibadda ama Spotify xirmaan
No, adeega ma laga heli karaa Haa
Hadda ka 'NOW' feature kaas oo uu dhawaan soo bandhigay ka yar yahay tijaabooyin iyo waxaa sidoo kale la filayaa in la heli karo si ay macaamiishu Premium. The feature NOW bixisaa music ee ku salaysan astaamaha iyo dareenkiisa. Waxaa la qabsiga dhadhankii iyo soo jeedisay songs la mid ah iyo in ka badan. (Its laga heli karaa oo keliya, waayo, dadka isticmaala macruufka oo kaliya.)
Iyadoo Times Premium ee, aad sameyn karto wax badan la Spotify, sargoyso music ah (tayo sare leh ay helaan geeyo), badbaadin aad music offline iyo ciyaaro mar kasta iyo meel kasta oo aad rabto.
version Beta ee Spotify waxay u baahan tahay inay la soo wareegto users-in shabakadda, biiri bulshada Spotify iyo dhammaystiraan faahfaahin qaar ka mid ah.
3. Spotify beta ee macruufka / daaqadaha / macruufka /
1. Spotify Beta ee macruufka
Iyada oo update ugu dambeeyay ee version macruufka ah, Spotify ayaa ku dhawaaqay version cusub. Version cusub ayaa la sheegay in ay la shaqeynayaan NOW shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale la shaqayn doonaa codsiga Fitness oo u hagaagsan lahaa music sida ay Isbadalo orodka aad ka.
2. Spotify beta daaqadaha
Update ugu danbeeyay ee codsiga daaqadaha (desktop) waa Spotify ku xirmaan. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad muusikada ciyaaro meel kasta oo isticmaalaya qalab kasta oo. Taas macnaheedu waxa weeye, halkii kaliya la isticmaalayo qalab aad ku hadla, waxaad isticmaali kartaa Spotify sida fog iyo muusig adiga oo isticmaaleya isticmaale laptop, TV ama Guddoomiye dibadda. Taasi waa qaar ka mid ah xorriyadda la yaab leh, waayo, kuwii ku caashaqi jiray music ah.
3. Spotify beta ee macruufka
Ugu danbeeyay Spotify beta 3.1 for Android yimaado la shaqeynayaan maamulka. Tani waxay u hagaagsan lahaa playlist sida Isbadalo orodka aad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa maamula xawaaro joogto waqti ka mid ah, codsiga dareemi lahaa xawaaraha iyo sidaas xiri tareenka sida. Muuqaal kale oo cusub waa audio / video muujinaysaa laga heli karaa shabakada Spotify ah. Tani feature cusub bixisaa hoorto qaar ka mid ah channels xushay sida xigeenka News, Nerdist iyo Comedy Central. Qaar ka mid ah channels filayaa yihiin BBC iyo MTV.
Sida loo Dhegayso Spotify Music la Spotify for Windows
Talooyinka Spotify Times
Top 10 ugu fiican playlists Spotify
Spotify Guide bilowga ah
> Resource > Spotify > Sidee badan oo ka taqaanaa Beta Spotify